Abahleli be-TMLT, Umbhali kwiiNdaba zeSikolo zaNgoku: Iindaba zeSikolo sangoku
Inqaku labahleli beTMLT
Izithuba zaBahleli ze-TMLT
Kufakwe kuyo umyalezo, Quote by Inqaku labahleli beTMLT ngoJulayi 23, 2021
Usuku lokuzalwa oluDibeneyo loDade: Udade unokufana nomhlobo osenyongweni, iqabane lakho elifanelekileyo kwaye usebenze njengotata. Ke, ukuba unodadewenu okanye usibazala kwaye ngumhla wokuzalwa kwakhe, kuya kufuneka umnqwenelele iikowuti kunye nemiyalezo emnandi neyonwabisayo yosuku lokuzalwa. Ukuba nodade […]
Kufakwe kuyo umsebenzi by Inqaku labahleli beTMLT ngoJulayi 23, 2021
www.immigration.gov.ng/recruitment form 2021: Inkonzo yokuFudukela eNigeria iqale ngempumelelo ukuqeshwa kwabafakizicelo beseshoni ye-2021. Eli phepha liza kukukhokela malunga nendlela yokufaka isicelo kwizithuba eziqhubekayo ezipapashwa yi-NIS kunye nokufumana izaziso zokuvulwa kweminye imisebenzi eNigeria kwabafundi kunye nabangafundanga. Inkonzo yokuFudukela eNigeria yiarhente […]
Kufakwe kuyo Iindaba zeSikolo by Inqaku labahleli beTMLT ngoJulayi 23, 2021
Olu lwazi lulandelayo luya kusebenza njengesikhokelo onokuthi usisebenzise xa ujonga isiphumo sokukhangela isiphumo kwi-National Open University 2021 ngokulandela ikhonkco lesiphumo www.nouonline.net. Siza kuqinisekisa ukuba ulwazi olunikezwe apha lwenziwe lula kwaye lucacile ngokwaneleyo ukuze ube nakho ukukhangela iziphumo zakho ngaphandle kolunye uhlobo […]
Kufakwe kuyo umyalezo by Inqaku labahleli beTMLT ngoJulayi 23, 2021
Ngaba ucinga ukuthumela iminqweno emihle yangoJulayi 2021 kunye nemiyalezo kwisoka lakho, intombi, umyeni, umfazi, ilungu losapho, okanye umhlobo? Ungakhathazeki kangako kuba ungaluqala kwangoko usuku ngokubazisa ubunzulu beemvakalelo zakho ngomyalezo wakusasa onengcinga. Le miyalezo iza kukunceda uthethe ngendlela oziva ngayo, […]
Kufakwe kuyo Iindaba Zobuhlengikazi, Technology by Inqaku labahleli beTMLT ngoJulayi 22, 2021
Ngokucacileyo uElon Musk ayinguye kuphela umgidi wezigidigidi onomdla wokudibana ne-ET Kweli nqaku siza kufumanisa ukuba uJeff Bezos usemajukujukwini kunye nawo wonke umphumo wohambo lwangaphandle. Ngubani uJeff Bezos? UJeff Bezos ngusomashishini ongumsunguli kunye ne-CEO yenkampani ye-e-commerce iAmazon, umnini […]
Kufakwe kuyo Iindaba Zobuhlengikazi by Inqaku labahleli beTMLT ngoJulayi 22, 2021
Emva komjikelo wexesha uqala kwimizuzwana embalwa ukuya kwimizuzu ukuya kwiiyure, emva koko ukuya kwiintsuku, iiveki neenyanga, sibuyele ekuqaleni. Isiqalo esixoxa ngaso apha ngulo mzuzu usikelelekileyo xa saziswa kweli hlabathi. Kuyaqondakala ukuba, ngoJulayi 2021 iminqweno yokuzalwa ifanelekile ekubhiyozeleni ubomi be […]
Ungaba yi-Anorexic ngokukhawuleza (oonobangela, unyango kunye neempawu)
Kufakwe kuyo amanqaku by Inqaku labahleli beTMLT ngoJulayi 22, 2021
Ukuba yi-Anorexic: Ukuba yi-Anorexic yinto enokwenzeka nakubani na kwaye siyacebisa ukuba ngelixa uzama ukubuyisa ukuzithemba kwakho ngokulahla ubunzima, jonga ukuba ungabi yi-Anorexic. Eli nqaku libandakanya yonke into oyifunayo malunga nokuba yi-anorexic ngexesha elincinci, oonobangela, imiqondiso, kunye […]
Umahluko phakathi kweAlmetmetal Alchemist kunye noMzalwana
Kufakwe kuyo Education by Inqaku labahleli beTMLT ngoJulayi 22, 2021
Umahluko phakathi kweAlchemist epheleleyo yeAlchemist kunye noMzalwana: I-Almetist epheleleyo yiJapan shōnen manga uthotho olubhalwe kwaye luboniswa nguHiromu Arakawa ngelixa uMzalwana uthotho lweTV yaseJapan eveliswa ngamathambo. Umahluko ophambili phakathi kwawo omabini la manqaku kukuba ubuzalwana buhlengahlengiswe kwi-Fullmetal Alchemist. Zombini ezi ngcelele zithathwe kweyona manga inkulu […]
Kutheni iMiyalezo yam eluhlaza kwi-iPhone yam kunye nendlela yokuLungisa
Kutheni le nto Imiyalezo yam iluhlaza ?: Kutheni imiyalezo yam ebhaliweyo iye yaGreen? Imiyalezo yakho ebhaliweyo iya kuthunyelwa okanye yamkelwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka nokuba usebenzisa itekhnoloji ye-Apple iMessage. Imiyalezo yakho ebhaliweyo iya kuba luhlaza nokuba usebenzisa iNkonzo yeMiyalezo emifutshane okanye iSMS (indlela yakudala). Umyalezo ophumayo kwi-iPhone yomyalezo we-app […]
Izikolo eziNcedisayo zoGqirha ze-PA zokungena kwi-2021
Kufakwe kuyo Iindaba zeSikolo by Inqaku labahleli beTMLT ngoJulayi 22, 2021
Ezona zikolo ziLula ze-PA zokungena: Uphando lubonakalisile ukuba ukungena kwisikolo sezonyango kunokuba nzima ngokwenene. Ke kunokuba yinto edinisayo yokuhlangana kunye neenqobo zokugweba ezifunekayo ukuze ungene kwisikolo samaGqirha aNcedisayo (PA). Ukuba unomdla wokulandela inkqubo yokuthweswa isidanga sobugqirha, kodwa ungenayo i-GPA enkulu yesidanga sokuqala, […]